Igumbi leholide kwilali etofotofo - I-Airbnb
Igumbi leholide kwilali etofotofo
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguSigrid
Indlu yam ikwidolophana encinci iOberschwandorf, (abemi abamalunga ne-800) ithule kakhulu kwaye iyathandeka, ilungele ukucima. Izixeko ezinkulu ezikufutshane iTuttlingen, iStockach neMesskirch zikumgama weekhilomitha eziyi-15. Intlambo entle yaseDanube yokunyuka intaba, ukunyuka intaba, ukuhamba ngephenyane... sele iza kufika emnyango, iLake Constance ingafikelelwa kwimizuzu eyi-30 neSwitzerland ekwisithuba nje seyure. Kukho izinto ezininzi zolonwabo kule ndawo, i-zoo, ibala leentambo eziphakamileyo, igalufa encinci, igalufa yebhola ekhatywayo, ukutyibilika ekhephini emanzini.... Eli gumbi litofotofo kubantu ababini, igumbi lokuhlala, amagumbi okuhlambela, ikhitshi kunye negadi zingasetyenziswa zonwabile. Ndihlala kule ndlu ndinabantu abadala ababini, imbacu encinci yaseSiriya, inja encinci kunye neekati ezimbini. Indawo yam ayiyondawo yanamhlanje - kodwa itofotofo! Kwiingxoxo, iingcebiso zolonwabo, mhlawumbi njengesikhokelo sohambo ( ukuba uyafuna kwaye ixesha liyavuma) siyakuvuyela ukuba nguwe! Abantwana nezilwanyana zasekhaya zamkelekile!
Le ndlu yifama endala enophahla olutshintshiweyo. Oku kwenza kubekho imeko ekhethekileyo kakhulu. Nangona kunjalo, iindonga kunye nesilingi ziqhekekile, iindlela kunye nezitepsi zincinci kakhulu kwaye ukuphakama kwesilingi kwigumbi leendwendwe ngu-1.75 m kuphela.
Igumbi libekwe kumantla-mpuma kwaye lipholile kakhulu ehlotyeni. Kukho ii-blinds ezimnyama. Ukukhwela izitepsi kuyafuneka.
4.78 · Izimvo eziyi-198
Abamelwane banobubele ibe bavulekile!
Ndisebenza ixesha elizeleyo, amaxesha amaninzi ngokuhlwa, kodwa ndithanda ukufumaneka ukuze ndincokole kwaye ndilume kunye ngexesha lam elikhululekileyo! ( ukuba kuyimfuneko)
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Neuhausen ob Eck